I-Ribbon Factory - Abakhiqizi baseChina nabaphakeli
Amaribhoni asetshenziswa kabanzi njengengxenye ebaluleke kakhulu yezindondo. Amaribhoni angahlinzekwa ngezinto ezahlukahlukene njenge-polyester, ukudluliswa kokushisa, nokwelukiweyo, inayiloni njll.Kuya ngokukhetha kweklayenti nokuthi ilogo kumele yenziwe kanjani. Uma i-logo inemibala efiphele, imisila yenkomo edluliselwe ukushisa ikhethwa kakhulu hhayi ngentengo yayo yokuncintisana, kepha futhi ubuso bayo buthambile. Ilogo ku-polyester imisila yenkomo imvamisa ukuphrinta kwe-silkscreen noma ukuphrinta kwe-CMYK. Imisila yenkomo eboshiwe noma yenayiloni ayivame ukukhethwa uma kubhekwa izindleko zayo zizonke. Usayizi ojwayelekile wamaribhoni yi-800mm ~ 900mm. Kwesinye isikhathi amaklayenti akhetha ubude obude, lokho kuyamukelwa. Ngaphandle kokuqukethwe kwamaribhoni nophawu lwawo, enye ingxenye ebalulekile yamaribhoni yikhwalithi yokuthunga. Ukuxhuma nezindondo, kungahle kuthungwe uV noma kuthungwe uH. Ukuthungwa kuka-H akudingi izesekeli zensimbi, kuyilapho i-V ethungiwe idinga indandatho yeribhoni futhi igxume iringi ukuxhuma amaribhoni nezindondo. Izinga lokuthunga kwethu liqedwa ngabasebenzi bethu abanolwazi oluningi, okungaqinisekisa ikhwalithi yalo ephakeme yokuthunga. Njengomhlinzeki wesipho sokuphromotha onguchwepheshe, singanikela ngayo yonke imikhiqizo esethiwe kufaka phakathi ukupakisha. Akunandaba ukuthi usixhuma ukuthenga amaribhoni kuphela noma ukuthenga wonke umkhiqizo kufaka nezindondo, zombili zamukelwa. Silapha ukulinda imibuzo yakho.